ပရီးမီးယားလိဂ်အိပ်မက်ကို ဒီရာသီမှာ လီဗာပူးလ် ပြန်မက်ခွင့်ရမလား
နှစ်ပေါင်း(၂၀)ကျော် ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်အိပ်မက်ကို ဒီရာသီမှာ လီဗာပူးလ် ပြန်မက်ခွင့်ရမလား
31 Jul 2018 . 12:07 PM
လီဗာပူးလ် Liverpool ဆိုတာက တစ်ခေတ်တစ်ခါတုန်းက အင်္ဂလန်မှာ ပြိုင်ဘက်မရှိတဲ့ Undisputed King ၊ ဥရောပ ဘောလုံးလောကမှာလည်း အောင်မြင်မှုအများဆုံး အင်္ဂလန်အသင်းဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးတယ်။ ၂၀ ရာစုကာလအတွင်း ပြည်တွင်းမှာ လီဗာပူးလ်ကို ယှဉ်နိုင်တဲ့အသင်းဆိုတာ မရှိခဲ့ဘူး။
၁၉၇၀ ကာလက စပြီး ၁၉၈၀ ကျော်အထိ ကြိုးကြာနီတို့ရဲ့ တောင်ပံခတ်သံက ဥရောပတစ်ဝှမ်းလုံးကို လွှမ်းမိုးထားနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒဲလ်ဂလစ်ရှ် Dalglish ၊ အီရန်ရှပ် Ian Rush ၊ ဆောင်းနက်စ် Souness ၊ လင်ဆေး Lindsay ၊ အလန်ဟန်ဆန် Alan Hansen ၊ ဂျွန်ဘန်းစ် John Barnes တို့လို သူရဲကောင်းတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ဂန္ထ၀င်နည်းပြတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဘီရှန်ကလေ Bill Shankly ၊ ဘော့ဘ်ပီယာစလေ Bob Paisley ၊ ဂျိုးဖာဂန် Joe Fagan တို့ရဲ့စွမ်းရည်တွေ ပေါင်းစပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ကြိုးကြာနီတို့ အမြင့်ပျံကာလတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။
လောကကြီးမှာ အနိမ့်အမြင့်အတက်အကျ သဘောတရားက Natural Truth လို့ ဆိုရမလား။ အဲဒီကန့်သတ်ချက်ကို ဘယ်အရာမှ မလွန်ဆန်နိုင်ဘူး။ လီဗာပူးလ်လည်း ဒီအတိုင်းပဲ။ ၁၉၈၀ ကျော်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ လီဗာပူးလ်အသင်း ကျရိပ်ပြလာပြီး ၁၉၉၀ ကနေ လက်ရှိအချိန်အထိ နှစ်ပေါင်း(၃၀)နီးပါးကာလအတွင်း FA ဖလား(၂)ကြိမ်၊ လိဂ်ဖလား(၁)ကြိမ်၊ ချန်ပီယံလိဂ်(၁)ကြိမ်ရခဲ့ပေမယ့် အင်္ဂလန်မှာတော့ မန်ယူရဲ့ကျော်ဖြတ်တာကို ခံခဲ့ရတယ်။ လီဗာပူးလ်နဲ့ မန်ယူဆိုတာကလည်း အင်္ဂလန်အနောက်မြောက်ဒါဘီ ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်လို့ တခြားအသင်းတွေထက်စာရင် မန်ယူကို အကျောပေးခဲ့ရတာက လီဗာပူးလ်တို့အတွက် ပိုပြီး မခံချိမခံသာဖြစ်စရာပဲ။ အခုဆိုရင် လီဗာပူးလ်အသင်း အမှတ်ပေးဖလားမရတာက (၂၈)နှစ်အထိ ကြာနေပြီ။ လီဗာပူးလ် အင်္ဂလန်အမှတ်ပေးလိဂ်မှာ နောက်ဆုံးဗိုလ်စွဲခဲ့တာက ၁၉၈၉-၉၀ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိအသင်းရဲ့ စီနီယာကစားသမား(၆)ဦးက အဲဒီတုန်းက မွေးဖွားခဲ့တဲ့သူတွေ။
နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို မန်ယူ၊ အာဆင်နယ်တို့သာမကဘဲ ချယ်လ်ဆီး၊ မန်စီးတီးအသင်းတွေပါ အပြန်အလှန်ရယူခဲ့တာကြောင့် လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ အမှတ်ပေးချန်ပီယံဖြစ်ရေး မျှော်လင့်ချက်က မှေးမှိန်နေခဲ့ရတယ်။ ဒီရာသီမှာတော့ (၂၈)နှစ်ကြာ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်အိပ်မက်တွေ တစ်ကျော့ပြန်မက်ဖို့ အခြေအနေကောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားနေပြီ။
နည်းပြယာဂန်ကလော့ပ် Jurgen Klopp ကလည်း ကြိုးကြာနီတို့ရဲ့ Image ကို မြှင့်တင်ပေးဖို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေပြီး ဒီနွေရာသီမှာ ကစားသမားသစ်တွေ ခေါ်ယူအားဖြည့်ထားတယ်။ ဒီရာသီ လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်အိပ်မက်တွေ အသက်ဝင်လာစေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့ . . .
‘Messi Of Goalkeepers’ အယ်လစ်ဆန် Alisson ကို ခေါ်ယူခဲ့တာ
ဂိုးသမားတစ်ဦးအတွက် ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင်(၆၇)သန်းနဲ့ ခေါ်ယူခဲ့တဲ့အချိန်မှာ လူတိုင်းရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဒီလောက်ပမာဏအထိ သုံးစရာလိုသလားဆိုတဲ့ သံသယမေးခွန်းတွေနဲ့ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းမှာ ဂိုးသမားကောင်းမရှိတဲ့ပြဿနာက ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတည်းကရှိနေတာဖြစ်ပြီး အဲဒီပြဿနာဟာ ယာဂန်ကလော့ပ်အတွက်လည်း ခေါင်းကိုက်စရာဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ မစ်ဂနိုလက် Mignolet ရော၊ ကာရီးယပ်စ် Karius ပါ ထိပ်တန်းအသင်းမှာ ကစားနေတဲ့ဂိုးသမားလို့ မထင်ရလောက်အောင် ရူးကြောင်ကြောင် အမှားတွေ ကျူးလွန်ခဲ့ပြီး ရသင့်တဲ့အမှတ်တွေ မရခဲ့တာ၊ မရှုံးသင့်ဘဲ ရှုံးခဲ့ရတာတွေကလည်း ခဏခဏ။ ဒါကြောင့် ယာဂန်ကလော့ပ်က ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ ရိုးမားအသင်းဂိုးသမား အယ်လစ်ဆန်ကို ဒီလောက်အထိ ငွေအများကြီးအသုံးပြု ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ရိုးမားအားကစားဒါရိုက်တာ မွန်ချီ Monchi ဆိုရင် အယ်လစ်ဆန်ဟာ ဂိုးသမားထဲမှာ မက်ဆီလို ကစားသမားမျိုး ‘Messi Of Goalkeepers’လို့တောင် ချီးကျူးခဲ့တဲ့အထိပဲ။ အယ်လစ်ဆန်ရောက်လာတာက လီဗာပူးလ်အသင်းမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဂိုးသမားပြဿနာကြီးကို ဖြေရှင်းနိုင်လိုက်တာပါပဲ။
အန်ဖီးလ် Anfield မြေကို ယာဂန်ကလော့ပ် ခြေချခဲ့တဲ့အချိန်စပြီး လီဗာပူးလ်အသင်းက ထိပ်သီးအသင်းတွေကို Challenge လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားကို ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့် မန်စီးတီးပေါ့။ မန်စီးတီးနဲ့ ဂွါဒီယိုလာ Guardiola ဆိုတာက ယာဂန်ကလော့ပ်အတွက် Piece Of Cake ပါပဲ။ နောက်ပြီး ကျန်တဲ့ ကြီး(၆)ကြီးစာရင်းဝင်အသင်းတွေနဲ့ Head To Head ကို ကြည့်ရင်လည်း အားရစရာကောင်းနေတယ်။ လီဗာပူးလ် သတိထားရမှာက အသင်းငယ်တွေနဲ့ပွဲမှာ တလွဲတချော်မဖြစ်ဖို့ပဲ။ အဲဒီ အားနည်းချက်ကို ပြင်ဆင်နိုင်ရင်တော့ ယာဂန်ကလော့ပ်ဟာ လီဗာပူးလ်အသင်းအတွက် ပထမဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား ရယူပေးခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးနည်းပြဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ပြိုင်ဘက်တိုင်းကို အိပ်မက်ဆိုးတွေ ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ MSF တိုက်စစ်အတွဲ
MSF-Attacking-Trioပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက မာနေး Mane ၊ ဆာလာ Salah ၊ ဖေမီနို Firmino တို့ရဲ့ MSF အတွဲက ပြိုင်ဘက်ခံစစ်အတွက် နတ်ဆိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ “အီဂျစ်မက်ဆီ”ဆာလာဆိုရင်လည်း လီဗာပူးလ်ကစားသမားဘ၀ ပထမဆုံးရာသီမှာပဲ မထင်မှတ်လောက်တဲ့ခြေစွမ်းတွေနဲ့ ဂိုးတွေ တဒိုင်းဒိုင်းသွင်းယူခဲ့တဲ့အပြင် တစ်ဦးချင်းအကောင်းဆုံးဆုတွေကိုလည်း သိမ်းကျူံးရယူခဲ့တဲ့ဆိုတာလည်း ပရိသတ်တွေ အသိပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ဒီ(၃)ယောက်ရဲ့ သွင်းဂိုးက(၉၁)ဂိုးအထိ ရှိခဲ့တာက တကယ့်ကို အားရစရာကောင်းတယ်။
အခုဆို ရှာကီရီ Shaqiri ၊ နာဘီကီတာ Naby Keita တို့လို တိုက်စစ်အတွက် အားကစားရတဲ့ကစားသမား၊ ဖာဘင်ဟို Fabinho လို Quality Midfielder တွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ ကစားသမားစုဖွဲ့မှုက အရင်နှစ်ကထက် ပိုတောင့်တင်းလာတော့ အမှန်ပဲ။ ဒီအချက်ကလည်း လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်အိပ်မက်တွေ အထမြောက်ဖို့ မျှော်လင့်ခွင့်ရှိစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးလ်အသင်းကတော့ (၂၈)နှစ်ကြာ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အမှတ်ပေးဖလားအိပ်မက်ကို ဒီရာသီမှာ ပြန်အသက်သွင်းဖို့ ကြိုးပမ်းနေပါပြီ။ သူတို့တွေ အောင်မြင်မလား ၊ ဒါမှမဟုတ် . . . .
လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ အောင်မြင်မှု မှတ်တမ်း
Photo:Goal.com,Evening Telegraph,Pinterest,The Sun,Ghanasoccernet.com,
Sports Illustrated,The Anfield Wrap,Vivaronews
နှဈပေါငျး(၂၀)ကြျော ပြောကျဆုံးနတေဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျအိပျမကျကို ဒီရာသီမှာ လီဗာပူးလျ ပွနျမကျခှငျ့ရမလား
လီဗာပူးလျ Liverpool ဆိုတာက တဈခတျေတဈခါတုနျးက အင်ျဂလနျမှာ ပွိုငျဘကျမရှိတဲ့ Undisputed King ၊ ဥရောပ ဘောလုံးလောကမှာလညျး အောငျမွငျမှုအမြားဆုံး အင်ျဂလနျအသငျးဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျတှေ ပိုငျဆိုငျခဲ့ဖူးတယျ။ ၂၀ ရာစုကာလအတှငျး ပွညျတှငျးမှာ လီဗာပူးလျကို ယှဉျနိုငျတဲ့အသငျးဆိုတာ မရှိခဲ့ဘူး။
၁၉၇၀ ကာလက စပွီး ၁၉၈၀ ကြျောအထိ ကွိုးကွာနီတို့ရဲ့ တောငျပံခတျသံက ဥရောပတဈဝှမျးလုံးကို လှမျးမိုးထားနိုငျခဲ့တယျ။ ဒဲလျဂလဈရျှ Dalglish ၊ အီရနျရှပျ Ian Rush ၊ ဆောငျးနကျဈ Souness ၊ လငျဆေး Lindsay ၊ အလနျဟနျဆနျ Alan Hansen ၊ ဂြှနျဘနျးဈ John Barnes တို့လို သူရဲကောငျးတှရေဲ့ စှမျးဆောငျရညျ ဂန်ထဝငျနညျးပွတှဖွေဈကွတဲ့ ဘီရှနျကလေ Bill Shankly ၊ ဘော့ဘျပီယာစလေ Bob Paisley ၊ ဂြိုးဖာဂနျ Joe Fagan တို့ရဲ့စှမျးရညျတှေ ပေါငျးစပျခဲ့တဲ့အခြိနျမှာ ကွိုးကွာနီတို့ အမွငျ့ပြံကာလတှဖွေဈခဲ့တယျ။
လောကကွီးမှာ အနိမျ့အမွငျ့အတကျအကြ သဘောတရားက Natural Truth လို့ ဆိုရမလား။ အဲဒီကနျ့သတျခကျြကို ဘယျအရာမှ မလှနျဆနျနိုငျဘူး။ လီဗာပူးလျလညျး ဒီအတိုငျးပဲ။ ၁၉၈၀ ကြျောနောကျပိုငျးနှဈတှမှော လီဗာပူးလျအသငျး ကရြိပျပွလာပွီး ၁၉၉၀ ကနေ လကျရှိအခြိနျအထိ နှဈပေါငျး(၃၀)နီးပါးကာလအတှငျး FA ဖလား(၂)ကွိမျ၊ လိဂျဖလား(၁)ကွိမျ၊ ခနျြပီယံလိဂျ(၁)ကွိမျရခဲ့ပမေယျ့ အင်ျဂလနျမှာတော့ မနျယူရဲ့ကြျောဖွတျတာကို ခံခဲ့ရတယျ။ လီဗာပူးလျနဲ့ မနျယူဆိုတာကလညျး အင်ျဂလနျအနောကျမွောကျဒါဘီ ပွိုငျဘကျတှဖွေဈလို့ တခွားအသငျးတှထေကျစာရငျ မနျယူကို အကြောပေးခဲ့ရတာက လီဗာပူးလျတို့အတှကျ ပိုပွီး မခံခြိမခံသာဖွဈစရာပဲ။ အခုဆိုရငျ လီဗာပူးလျအသငျး အမှတျပေးဖလားမရတာက (၂၈)နှဈအထိ ကွာနပွေီ။ လီဗာပူးလျ အင်ျဂလနျအမှတျပေးလိဂျမှာ နောကျဆုံးဗိုလျစှဲခဲ့တာက ၁၉၈၉-၉၀ ဖွဈပွီး လကျရှိအသငျးရဲ့ စီနီယာကစားသမား(၆)ဦးက အဲဒီတုနျးက မှေးဖှားခဲ့တဲ့သူတှေ။
နောကျပိုငျးနှဈတှမှော ပရီးမီးယားလိဂျဖလားကို မနျယူ၊ အာဆငျနယျတို့သာမကဘဲ ခယျြလျဆီး၊ မနျစီးတီးအသငျးတှပေါ အပွနျအလှနျရယူခဲ့တာကွောငျ့ လီဗာပူးလျအသငျးရဲ့ အမှတျပေးခနျြပီယံဖွဈရေး မြှျောလငျ့ခကျြက မှေးမှိနျနခေဲ့ရတယျ။ ဒီရာသီမှာတော့ (၂၈)နှဈကွာ ပြောကျဆုံးနတေဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျအိပျမကျတှေ တဈကြော့ပွနျမကျဖို့ အခွအေနကေောငျးတှေ ပိုငျဆိုငျထားနပွေီ။
နညျးပွယာဂနျကလော့ပျ Jurgen Klopp ကလညျး ကွိုးကွာနီတို့ရဲ့ Image ကို မွှငျ့တငျပေးဖို့ အစှမျးကုနျကွိုးပမျးနပွေီး ဒီနှရောသီမှာ ကစားသမားသဈတှေ ချေါယူအားဖွညျ့ထားတယျ။ ဒီရာသီ လီဗာပူးလျအသငျးရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျအိပျမကျတှေ အသကျဝငျလာစနေိုငျတဲ့ အကွောငျးအရာတှကေတော့ . . .
‘Messi Of Goalkeepers’ အယျလဈဆနျ Alisson ကို ချေါယူခဲ့တာ
ဂိုးသမားတဈဦးအတှကျ ကမ်ဘာ့စံခြိနျတငျပွောငျးရှကွေ့ေး ပေါငျ(၆၇)သနျးနဲ့ ချေါယူခဲ့တဲ့အခြိနျမှာ လူတိုငျးရဲ့ စိတျထဲမှာ ဒီလောကျပမာဏအထိ သုံးစရာလိုသလားဆိုတဲ့ သံသယမေးခှနျးတှနေဲ့ပေါ့။ ဒါပမေဲ့ လီဗာပူးလျအသငျးမှာ ဂိုးသမားကောငျးမရှိတဲ့ပွဿနာက ပွီးခဲ့တဲ့နှဈတှကေတညျးကရှိနတောဖွဈပွီး အဲဒီပွဿနာဟာ ယာဂနျကလော့ပျအတှကျလညျး ခေါငျးကိုကျစရာဖွဈခဲ့ရတယျ။ မဈဂနိုလကျ Mignolet ရော၊ ကာရီးယပျဈ Karius ပါ ထိပျတနျးအသငျးမှာ ကစားနတေဲ့ဂိုးသမားလို့ မထငျရလောကျအောငျ ရူးကွောငျကွောငျ အမှားတှေ ကြူးလှနျခဲ့ပွီး ရသငျ့တဲ့အမှတျတှေ မရခဲ့တာ၊ မရှုံးသငျ့ဘဲ ရှုံးခဲ့ရတာတှကေလညျး ခဏခဏ။ ဒါကွောငျ့ ယာဂနျကလော့ပျက ထိပျတနျးအဆငျ့ရှိတဲ့ ရိုးမားအသငျးဂိုးသမား အယျလဈဆနျကို ဒီလောကျအထိ ငှအေမြားကွီးအသုံးပွု ချေါယူခဲ့တာဖွဈတယျ။ ရိုးမားအားကစားဒါရိုကျတာ မှနျခြီ Monchi ဆိုရငျ အယျလဈဆနျဟာ ဂိုးသမားထဲမှာ မကျဆီလို ကစားသမားမြိုး ‘Messi Of Goalkeepers’လို့တောငျ ခြီးကြူးခဲ့တဲ့အထိပဲ။ အယျလဈဆနျရောကျလာတာက လီဗာပူးလျအသငျးမှာ နှဈပေါငျးမြားစှာ ရငျဆိုငျနရေတဲ့ ဂိုးသမားပွဿနာကွီးကို ဖွရှေငျးနိုငျလိုကျတာပါပဲ။
အနျဖီးလျ Anfield မွကေို ယာဂနျကလော့ပျ ခွခေခြဲ့တဲ့အခြိနျစပွီး လီဗာပူးလျအသငျးက ထိပျသီးအသငျးတှကေို Challenge လုပျနိုငျတဲ့အနအေထားကို ပွနျရောကျလာခဲ့တယျ။ အထူးသဖွငျ့ မနျစီးတီးပေါ့။ မနျစီးတီးနဲ့ ဂှါဒီယိုလာ Guardiola ဆိုတာက ယာဂနျကလော့ပျအတှကျ Piece Of Cake ပါပဲ။ နောကျပွီး ကနျြတဲ့ ကွီး(၆)ကွီးစာရငျးဝငျအသငျးတှနေဲ့ Head To Head ကို ကွညျ့ရငျလညျး အားရစရာကောငျးနတေယျ။ လီဗာပူးလျ သတိထားရမှာက အသငျးငယျတှနေဲ့ပှဲမှာ တလှဲတခြျောမဖွဈဖို့ပဲ။ အဲဒီ အားနညျးခကျြကို ပွငျဆငျနိုငျရငျတော့ ယာဂနျကလော့ပျဟာ လီဗာပူးလျအသငျးအတှကျ ပထမဆုံးပရီးမီးယားလိဂျဖလား ရယူပေးခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးနညျးပွဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။
ပွိုငျဘကျတိုငျးကို အိပျမကျဆိုးတှေ ဖနျတီးပေးနိုငျတဲ့ MSF တိုကျစဈအတှဲ
ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက မာနေး Mane ၊ ဆာလာ Salah ၊ ဖမေီနို Firmino တို့ရဲ့ MSF အတှဲက ပွိုငျဘကျခံစဈအတှကျ နတျဆိုးတှဖွေဈခဲ့တယျ။ “အီဂဈြမကျဆီ”ဆာလာဆိုရငျလညျး လီဗာပူးလျကစားသမားဘ၀ ပထမဆုံးရာသီမှာပဲ မထငျမှတျလောကျတဲ့ခွစှေမျးတှနေဲ့ ဂိုးတှေ တဒိုငျးဒိုငျးသှငျးယူခဲ့တဲ့အပွငျ တဈဦးခငျြးအကောငျးဆုံးဆုတှကေိုလညျး သိမျးကြူံးရယူခဲ့တဲ့ဆိုတာလညျး ပရိသတျတှေ အသိပဲ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက ဒီ(၃)ယောကျရဲ့ သှငျးဂိုးက(၉၁)ဂိုးအထိ ရှိခဲ့တာက တကယျ့ကို အားရစရာကောငျးတယျ။
အခုဆို ရှာကီရီ Shaqiri ၊ နာဘီကီတာ Naby Keita တို့လို တိုကျစဈအတှကျ အားကစားရတဲ့ကစားသမား၊ ဖာဘငျဟို Fabinho လို Quality Midfielder တှေ ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ လီဗာပူးလျအသငျးရဲ့ ကစားသမားစုဖှဲ့မှုက အရငျနှဈကထကျ ပိုတောငျ့တငျးလာတော့ အမှနျပဲ။ ဒီအခကျြကလညျး လီဗာပူးလျအသငျးရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျအိပျမကျတှေ အထမွောကျဖို့ မြှျောလငျ့ခှငျ့ရှိစနေိုငျတာပဲဖွဈပါတယျ။လီဗာပူးလျအသငျးကတော့ (၂၈)နှဈကွာ ပြောကျဆုံးနတေဲ့ အမှတျပေးဖလားအိပျမကျကို ဒီရာသီမှာ ပွနျအသကျသှငျးဖို့ ကွိုးပမျးနပေါပွီ။ သူတို့တှေ အောငျမွငျမလား ၊ ဒါမှမဟုတျ . . . .
လီဗာပူးလျအသငျးရဲ့ အောငျမွငျမှု မှတျတမျး